Erdogan ma wuxuu ka guuleystay Donald Trump? |
Turkiga (NogobNews) 18/10/2019
Ujeedka hawlgalka ay u sameyeen ayuu wasiirka sheegay inay tahay sidii aagaas xuduuda looga xoreyn lahaa Kurdiyiinta “argagixisada ah.”
“Mareykanka waxaa uu sii ansixiyay un qorshaha Turkiga uu isugu ballaarinayo 30 kilomitir oo gudaha Suuriya, taas oo aanan ka turjumeyn xaqiiqda gudaha taala, ” ayuu yiri Brett McGurk oo sarkaal hore oo Mareykanka u qaabilsanaa dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS, balse iska casilay xukuumadda Trump.
“Tani waxay si cad uga dhigan tahay in Mareykanka uu xalaaleeyay waxa Turkiga uu sameeyay, una oggolaaneysa inay isku ballaariyaan dhulka Suuriya, barakiciyaanna bulshada Kurdiyiinta”, sidaas waxaa wargeyska The Foreign policy u sheegay sarkaal sare oo katirsan xukuumadda Trump oo ka gaabsaday magaciisa.
Image captionXoogaga Kurdiyiinta